Saraakiil ka hadashay dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & hub lagu qabsaday | dayniiile.com
Home WARKII Saraakiil ka hadashay dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & hub lagu qabsaday
Saraakiil ka hadashay dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & hub lagu qabsaday
Waxaa saaka xaalad deganaansho ah laga dareemayaa degaanka Bacda oo hoostaga degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku dagaalameen Ciidamada dowladda iyo kuwa degaanka ah ee loo yaqaano Macawiisleeyda & Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaadka Macawiisleeyda oo garab ka helaya Taliska guutada 5-aad qeybta 27-aad ee Ciidanka xoogga dalka ay weerar ku qaadeen Saldhig Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen degaanka Bacda ee Gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo geystay dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal lagu magacaabo Xasan Faarax oo hoggaaminayay weerarkii lagu qaaday fariisinka Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Bacda ee hoostaga degmada Matabaan ayaa sheegay in ay ka furteen dhowr qori oo AK47 ah kadib dagaal xoogan oo deegaankaasi ka dhacay.
Al-Shabaab ayaa dhankooda weli ka hadlin dagaalka, waxaana Goobta la weeraray ay aheyd meel ay Al-Shabaab ka abaabuli jireen weerarada ay ku qaadi jireen degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Ciidamada Macawiisleeyda ee bilaabatay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay abaabuleen Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo taliyaha guutada 5-aad qeybta 27-aad tee CXD Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay.
Previous articleDowladda oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab
Next articleHowlgal ka billaawday Magaalada Garoowe & faah faahin laga bixiyay
Yey u badan tahay in uu noqdo madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya?
Dagaallo qadhaar oo weli ka socda aagga Donbas ee bariga Ukraine.